WARBIXIN: Kenya oo Somalia ku sheegtay Dalka Sedexaad ay Faa’iidada ugu badan ku qabto – XAMAR POST
WARBIXIN: Kenya oo Somalia ku sheegtay Dalka Sedexaad ay Faa’iidada ugu badan ku qabto
Warbixin Sanadeedka Wax soo saarka Kenya ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay kaalinta 3aad ka soo gashay Waddamada Afrika ee iibsada Badeecadaha ay soo saarto Kenya.
Wargeyska Business Daily ayaa daabacay in Sanadkan 2017,gaar ahaan lixdii bilood ee ugu horreysay uu sare u kac wanaagsan sameeyay waxsoo saarka Kenya.
Lixdii bilood ee ugu horreysay Sanakdan Waxsoo saarka Kenya 33.5% waxaa iibsatay Soomaaliya,waana midda ay Kenya ku sheegtay in Soomaaliya kaalinta saddexaad uga jirto iibsiga badeecadaha Kenya soo saarto.
Xukuumadda Nairobi ayaa arrintan u sababeeysay kaddib markii Muqdisho iyo Nairobi ay heshiisyo muhiim ah kala saxiixdeen dhamaadkii 2016kii,gaar ahaan xal ka gaaristii Qaadka Kenya ee ay Somaliya iska joojisay Bishii September 2016kii,taas oo sababtay in Madaxweynaha Kenya iyo Madaxweynihii hore ee Soomaaliya heshiis ku kala saxiixday Muqdisho.
Soomaaliya waxaa ay booskan kala wareegtay Waddamada Masar,Koofurta Suudaan iyo Rwanda,waxyaabaha ay Kenya dibadda u dhoofiso waxaa 90% ka ah Qaadka,waxaana Sanadkii la soo dhaafay Soomaaliya diidday Qaadka Kenya kaddib markii khilaaf diblomaasiyadeed ka dhashay Guddoomiye Gobol oo Maamulka Somaliland u ballan qaaday aqoonsi haddii Qaadka Kenya suuq ka helo Hargeysa.
Kenya waxaa ay hadda labo Diyaaradood oo Qaad ah geysaa Hargeysa iyada oo ka faa’ideysaneysa khilaafka Oromada iyo Soomaalida oo sababay in Ganacsigii labada dhinac istaago,waxaan ganacsatada Qaadka ee Kenya ugu baaqeen dowladda in fursadda ay ka heleen Hargeysa noqoto mid sideeda u taagnaata xitaa haddii ay heshiiyaan Somalida iyo Oromada.
Warar hor dhac ah oo laga helaayo Shirka Kismaayo.
DAAWO: Barafuun dad badan ku Geeriyoodeen oo laga Cabsi qabo inuu Somalia soo gaaro